ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျမှာ နောကျထပျသန်ဓသေား ကိုယျဝနျရနိုငျသလား? - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျမှာ နောကျထပျသန်ဓသေား ကိုယျဝနျရနိုငျသလား?
ဒါကမယုံနိုငျစရာကောငျးပမေယျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျအတှငျးမှာ နောကျထပျ ကိုယျဝနျရလာနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ သိပ်ပံဝတ်တုရုပျရှငျတှထေဲက သဘာဝလှနျဖွဈရပျဆနျးမြားလို့ ထငျရပမေယျ့ ဒါကအမှနျဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျအတှငျးမှာ နောကျထပျ ပဋိသန်ဓတေညျနိုငျပါတယျ။ ဒီစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးသော အကွောငျးအရာကို Bright Sideမှာ ယခုလိုဖျောပွပေးထားပါတယျ။
ဒါက သာမနျအားဖွငျ့ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျတဲ့ ကိစ်စတဈခုဖွဈပမေယျ့ ရှားပါးအခွအေနတှေမှော ဖွဈနိုငျတယျလို့ သိပ်ပံပညာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒီရှားပါးအခွအေနကေို (superfetation)စူပါဖတျတေးရှငျး လို့ချေါပါတယျ။ ကိုယျဝနျရှိနပေါရကျနဲ့ နောကျထပျသန်ဓသေားကိုယျဝနျတဈခု ထပျရခွငျးမြိုးပါ။ happy mother တဈယောကျဟာ မတူညီတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျကာလနှငျ့အတူ အမှာနှဈယောကျ ရရှိသှားတာဖွဈပါတယျ။ တခါတရံ ကလေးနှဈယောကျဟာ မှေးတဲ့ရကျတောငျ မတူပါဘူး။
Superfetation က superfecundation နဲ့မတူပါဘူး။ superfecundationဆိုတာ (menstrual period)သားဥကွှခြေိနျကာလတဈခု အတှငျးမှာ တဈယောကျထကျပိုတဲ့ လိငျဆကျဆံမှုကနေ လှတျထုတျလိုကျတဲ့ မြိုးဥ ၂ခု မြိုးအောငျသှားခွငျးကို ဆိုလိုပါတယျ။ ဒီကိစ်စမှာ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ဖအမေတူ ကလေးအမှာရရှိခွငျးဖွငျ့ အဆုံးသတျပါလိမျ့မယျ။ Superfetation ကတော့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ မတူညီတဲ့ သားဥကွှခြေိနျအတှငျးမှာ သန်ဓတေညျတာဖွဈပွီး ကိုယျဝနျဆောငျကာလက ကှာခွားပါတယျ။ မှေးလာတဲ့အမှာက ကိုယျအလေးခြိနျ၊ အရပျနှငျ့ သှေးအမြိုးအစားတောငျ ကှာခွားပါလိမျ့မယျ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျ ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ သူမရဲ့သားအိမျဟာ ကလေးတဈယောကျ ကွီးထှားလာဖို့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျကို ပွငျဆငျပေးဖို့ အခကျြပွတဈခုအဖွဈ ဟျောမုနျးတှေ ပေးပို့ပါတယျ။ ထိုဟျောမုနျးမြားက သားအိမျကို မြိုးဥထုတျလှတျပေးခွငျးကို ရပျတနျ့စပေါတယျ။ သို့သျော ပထမသန်ဓသေားဟာ ဖှံ့ဖွိုးမှု နှေးကှေးနတောကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျထှကျတဲ့ ဟျောမုနျးတှေ မထှကျဘဲ မမြိုးဥတှေ ထှကျနသေေးတာကွောငျ့ ဒီအခွအေနဖွေဈရတယျလို့ မှတျယူကွပါတယျ။
Funny educational illustration of conception
ဒီသဘာဝလှနျ ရှားပါးဖွဈစဉျကို တရားဝငျ စာရငျးပွုစုထားခဲ့တာဟာ (၁၀) ခုလောကျပဲ ရှိတယျလို့ဆိုပါတယျ။ နောကျဆုံးတဈယောကျက ကိတျဟေးလို့ချေါတဲ့ သွစတွေးလြ အမြိုးသမီးတဈယောကျဖွဈပွီး ၁၀ ရကျအတှငျးမှာ အမှာကိုယျဝနျရလာတာ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ အမှာတှအေဖွဈ သတျမှတျခံရသူ Charlotte နဲ့ Olivia ဆိုတဲ့ မိနျးကလေးနှဈယောကျကို မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ သို့သျော သူတို့သန်ဓတေညျတဲ့ အခြိနျကှာခွားမှုက ၁၀ရကျသာရှိပါတယျ။ သူတို့ဟာ တဈနတေ့ညျ့ မှေးဖှားခဲ့ကွပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ၊ သှေးအမြိုးအစားတှေ ကှဲပွားခွားနားခဲ့ပါတယျ။
happy ñats family. Cat and kittens.
Superfetation က တိရိစ်ဆာနျတှကွေားမှာလညျး ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။ ကွှကျ၊ သားပိုကျကောငျ၊ ယုနျ၊ ကွောငျနှငျ့ သိုးတှမှော superfetation အကွောငျးကိစ်စတှေ ဖွဈနိုငျတယျလို့ အခိုငျအမာပွောဆိုထားတာ ရှိပါတယျ။ ငါးမှာလညျး ဒီထူးခွားတဲ့ စှမျးရညျရှိကွောငျးပွသခဲ့ပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျဆနျးကို ယုနျတှမှော ပထမဆုံးသတိပွုမိခဲ့သူက အရစ်စတိုတယျ ဖွဈပါတယျ။ သူက ယုနျလေးတှမှော အရှယျအစားမတူသော ကလေးလေးတှေ မှေးဖှားခဲ့ကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ အငယျဆုံး တဈကောငျက အရှယျအစား သိသိသာသာ သေးငယျတာကို တှခေဲ့ကွပါတယျ။ အငယျဆုံးသားပေါကျလေးက ဒုတိယကိုယျဝနျ ဖွဈတညျမှုကွောငျ့ ပိုသေးသှားတဲ့ superfetation ရလဒျကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျဆနျးနှငျ့ ပတျသတျပွီး အရငျက သငျကွားဘူးပါသလား?မှတျခကျြလေးတှပေေးသှားပါဦးနျော။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ နောက်ထပ်သန္ဓေသား ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား?
ဒါကမယုံနိုင်စရာကောင်းပေမယ့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ နောက်ထပ် ကိုယ်ဝန်ရလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ္ပံဝတ္တုရုပ်ရှင်တွေထဲက သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများလို့ ထင်ရပေမယ့် ဒါကအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ နောက်ထပ် ပဋိသန္ဓေတည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသော အကြောင်းအရာကို Bright Sideမှာ ယခုလိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒါက သာမန်အားဖြင့် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ရှားပါးအခြေအနေတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီရှားပါးအခြေအနေကို (superfetation)စူပါဖတ်တေးရှင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပါရက်နဲ့ နောက်ထပ်သန္ဓေသားကိုယ်ဝန်တစ်ခု ထပ်ရခြင်းမျိုးပါ။ happy mother တစ်ယောက်ဟာ မတူညီတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလနှင့်အတူ အမွှာနှစ်ယောက် ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံ ကလေးနှစ်ယောက်ဟာ မွေးတဲ့ရက်တောင် မတူပါဘူး။
Superfetation က superfecundation နဲ့မတူပါဘူး။ superfecundationဆိုတာ (menstrual period)သားဥကြွေချိန်ကာလတစ်ခု အတွင်းမှာ တစ်ယောက်ထက်ပိုတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကနေ လွှတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ မျိုးဥ ၂ခု မျိုးအောင်သွားခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဖအေမတူ ကလေးအမွှာရရှိခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ Superfetation ကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ မတူညီတဲ့ သားဥကြွေချိန်အတွင်းမှာ သန္ဓေတည်တာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလက ကွာခြားပါတယ်။ မွေးလာတဲ့အမွှာက ကိုယ်အလေးချိန်၊ အရပ်နှင့် သွေးအမျိုးအစားတောင် ကွာခြားပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ သူမရဲ့သားအိမ်ဟာ ကလေးတစ်ယောက် ကြီးထွားလာဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြင်ဆင်ပေးဖို့ အချက်ပြတစ်ခုအဖြစ် ဟော်မုန်းတွေ ပေးပို့ပါတယ်။ ထိုဟော်မုန်းများက သားအိမ်ကို မျိုးဥထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းကို ရပ်တန့်စေပါတယ်။ သို့သော် ပထမသန္ဓေသားဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးနေတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ မထွက်ဘဲ မမျိုးဥတွေ ထွက်နေသေးတာကြောင့် ဒီအခြေအနေဖြစ်ရတယ်လို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။
ဒီသဘာဝလွန် ရှားပါးဖြစ်စဉ်ကို တရားဝင် စာရင်းပြုစုထားခဲ့တာဟာ (၁၀) ခုလောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်က ကိတ်ဟေးလို့ခေါ်တဲ့ သြစတြေးလျ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၁၀ ရက်အတွင်းမှာ အမွှာကိုယ်ဝန်ရလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အမွှာတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသူ Charlotte နဲ့ Olivia ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူတို့သန္ဓေတည်တဲ့ အချိန်ကွာခြားမှုက ၁၀ရက်သာရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်နေ့တည့် မွေးဖွားခဲ့ကြပြီး ကိုယ်အလေးချိန်၊ သွေးအမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားခြားနားခဲ့ပါတယ်။
Superfetation က တိရိစ္ဆာန်တွေကြားမှာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်၊ သားပိုက်ကောင်၊ ယုန်၊ ကြောင်နှင့် သိုးတွေမှာ superfetation အကြောင်းကိစ္စတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာ ရှိပါတယ်။ ငါးမှာလည်း ဒီထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်ရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ယုန်တွေမှာ ပထမဆုံးသတိပြုမိခဲ့သူက အရစ္စတိုတယ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ယုန်လေးတွေမှာ အရွယ်အစားမတူသော ကလေးလေးတွေ မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အငယ်ဆုံး တစ်ကောင်က အရွယ်အစား သိသိသာသာ သေးငယ်တာကို တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ အငယ်ဆုံးသားပေါက်လေးက ဒုတိယကိုယ်ဝန် ဖြစ်တည်မှုကြောင့် ပိုသေးသွားတဲ့ superfetation ရလဒ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အရင်က သင်ကြားဘူးပါသလား?မှတ်ချက်လေးတွေပေးသွားပါဦးနော်။
Previous articleဝမျးနညျးစရာကောငျးတဲ့ မိသားစု ရာဇဝငျရှိခဲ့သူ K-Pop အိုငျဒေါ (၈)ယောကျ
Next articleလယောဥျတဈစီးတညျး အတူတူစီးရငျး ဆိုးရှားတဲ့ရာသီဥတုကွောငျ့ ခဈြသူတှဖွေဈခဲ့ကွတဲ့ စုံတှဲ